Sida loo diyaariyo bibimbap, bariis sare oo Kuuriya ah - Hagaajinta caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » rasiidhada »Sida loo diyaariyo bibimbap, bariis heer sare ah oo Kuuriya - Horumarinta caafimaadkaaga
Sida loo diyaariyo bibimbap, bariis sare oo Kuuriya ah - Hagaajinta caafimaadkaaga
Qodobkani, waxaanu kula wadaagnaa qaamuuska tallaabo tallaabo ah ee bariiska Kuuriya ama Bibimbap, khudradda bariiska, hilibka, ukunta iyo khudradda oo aad u fiican oo aan la seegin!
Bariisku waa mid ka mid ah maaddooyinka aasaasiga ah ee dhirta bariiska. Thanks to dhadhanka iyo dhadhanka, waxaa lagu dari karaa dhammaan noocyada suxuunta, ama midda ugu muhiimsan ama sida quruxda. Ma taqaanaa sida loo diyaariyo cuntooyinka bariiska ee Kuuriya?
Waxtarka nafaqada ee bariiska
Khayraadka karbohidratka caafimaad leh, bariis waa ilo dabiici ah oo tamar ah. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa tryptophan (amino acid muhiim ah), fitamiinada B3 iyo B6, antioxidants iyo borotiinada tayada.
Sabab kale oo aad ku dartid bariiska cuntadaada ayaa ahkuma jirto baruurta oo waxay leedahay soodhiyo hooseeya! Maaddaama ay taajir tahay fibre la sifeeyay, waxaa la aaminsan yahay in ay ka caawiso ka hortagga bilowga kansarka, gaar ahaan xiidmaha.
Ugu weyn qaybta bariiska waa istaarijin, kaas oo ka kooban amylose iyo amylopectin. Tilmaamaha nooc kasta oo bariis ah waxay ku xirantahay midkee ka mid ah labadan walaxood. Marka saamiga amylopectin uu ka sarreeyo, miro ayaa aad u badan, tusaale ahaan.
Dooro bariiska saxda ah ee roodhiga mid kastaa waa lagama maarmaanka u ah qashinka si loo dhigo waxa aad filayso: iibso bariis ku habboon saxankaaga!
Guud ahaan, nafaqada waxay ku talineysaa halkii ay dooran lahayd bariiska buniga sababtoo ah waxay ka kooban tahay maaddada fiber. Ha ka waaban inaad la tashato dhakhtarkaaga macluumaad dheeraad ah.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa: Waa maxay habka ugu caafimaadka badan ee loo isticmaalo bariiska?
Bariiska Kuuriya ama Bibimbap talaabo talaabo ah
Ka hor inta aanad u gudbin tallaabo tallaabo tallaabo ah oo kobcinaya koofurta Kuuriya, waxaan rabnaa inaan ka hadalno ha ahaato ama ha ku dhaqin bariiska kahor inta aan la karin. Caadaysani waa mid aad u badan, gaar ahaan dalalka Aasiya.
Waagii hore, waxay ahayd caado ah in la dhaqo bariiska si loo soo saaro wixii cayayaanka ama burburka u dhexeeya miro.
Maanta, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan mawduucan. Iyadoo qaar ka mid ah boorsooyinka ayaa ku talinaya in la dhaqo bariiska si loo soo saaro istaarijiyo xad dhaaf ah oo ka dhig midka bariiska ka sii badan moukuwa kale waxay ku doodaan in aanay muhiim ahayn.
Sida laga soo xigtay xogta daabacday FDA (Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha), dhaqashada bariiska ka hor intaan wax karin karin sidoo kale laga tirtiri karo qaar ka mid ah folate, birta iyo thiamine. Sababtan awgeed, ma nadiifin doonno bariiska markaan diyaarineyno iskadiidan Bibimbap.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay bibimbap
Koobka 1 ee bariiska Japan (oo loo yaqaan "bariis sushi")
300 grams ee hilibka lo'da
Koobka spinach 1
1 karooto waaweyn
10 boqoshaada waaweyn
Koobka 1 ee sprouts
Xamuusyada 80 ee Kimchi
cusbo (sida dhadhanka)
saliid (tirada loo baahan yahay)
note Haddii aadan haysan bariiska Japan, waxaad isticmaali kartaa bariiska wareega.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay marineynta hilibka
Saamaynta 2 ee soya soya
1 shaaha oo saliid ah
½ qaado oo ah budada toonta
1 c. qaxwaha mirin (Ikhtiyaar)
Waxyaabaha ay ka kooban tahay suugaanta gochujang
Saamaynta 2 ee gochujang
1 qaado biyo iyo bariis khal (ikhtiyaar)
1 qaado shaaha saliidda, sonkorta iyo sisinta
note : Gochujang waa dhoobo soy ah oo qallalan leh oo leh basbaaska.
Isku qas maraqa soya leh saliidda sisinta, budada toonta iyo mirin si aad u diyaariso isku dar ah marinka.
Marinate hilibka duqadda ah ee suugada loo diyaariyey barta hore. Laakiin muhiim maaha inaad ka baxdo hilibka dheer: ku saabsan daqiiqado 7 ayaa ku filan.
Sauté hilibka ee skillet ama wok. Dabadeedna buug.
Ku shub saliida saliidda, qandhada iyo ku dar bariiska. Ha joojin isku walaaq si aad uga hortagto gubasho ama kaadi.
Hal daqiiqo ka dib, ku dar laba koob oo biyo ah iyo cusbo dhadhan. Karso kuleyl dhexdhexaad ah illaa bariiska uu diyaar yahay (ku saabsan daqiiqado 10 ama sida loogu talagalay xirmada).
Dhaq, diirka iyo jarjar dabaclaha julienne iyo boqoshaada jarjaran.
Si fiican u dhaq marmarka isbinaajka iyo soy.
Isku day in yar oo saliideed ah oo ku dhex shub weel la jarjarey ama daqiiqo ah. Ku celi boqoshaada. Fikradda waa in la dhimo.
Spinach isbinaajka iyo ugu dambeyntii sprouts maraq si gooni gooni ah. Si gaar ah uga taxaddar sababta oo ah si dhakhso ah ayaad u karisaa
Si aad u diyaariso suugaanta goosinta, ku rid dhammaan walxaha ku jira baaquli iyo si fiican u walaaq ilaa aad haysato Suugo siman. Haddii aad dooratid Suugo yar oo basbaas ah, kaliya ku dar shaaha shinbiraha.
Diyaarso laba ukun oo la shiilay.
Sidoo kale soo celi: Cuntooyinka 3 ee la sameeyey baasto iyo digaag
Bariiska Kuuriya waxaa loo adeegsan karaa saxan qoto dheer ama si toos ah saxan caag ah.
Ku rid saldhig burcad ah.
Ku rid maaddooyinka kale ee bariiska sidaa daraadeed waxaa loo kala saaraa midabsida sawirka lagu muujiyay.
Bartamaha, ku rid ukunta saxanka.
Maraqa gochujang waxaa si gooni ah loogu adeegaa oo marti kasta waxay ku dareysaa bariiska Kuuriya si uu jecel yahay.
Waa diyaar! Waxaad horey u leedahay laba suxuun oo Bibimbap ah oo dhadhankiisa.
Fikradaha kale ee bibimbap
Waxaad sidoo kale u rogi kartaa suxuunkan cuntooyinka khudradda khudradda ah, halkii aad isticmaali lahayd hilibka duqadda ah, waxaad diyaarineysaa tofu.
Isku day inaad ku darto noocyo kale oo khudaar ah oo bariiska Kuuriya, sida digirta cagaaran, zucchini, basal casaan, basbaas, ama wax kale oo aad qiyaasi kartid.
Haddii aadan lahayn gochujang, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa maraqa bacar ah si aad u samayso suugada.
In cunto kariska asalka ah, u adeegi ukunta ceeriin ceeriin dhexda, isku day!
Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyootay suugaankan kalluumeysiga sahlan ee kalluumeysiga kaddibna waad isku dayi doontaa! Sidoo kale waa hab fiican oo lagu daro khudrado badan oo ah noocyadeena caadiga ah.
3 raashinka roodhida leh
Bariisku waa cereal aad u caan ah oo ay qadariyaan dad badan ... Halkan waxaa ku qoran raashinka bariiska ee 3 ee kugu yaabi doona! Delicious iyo fudud ... Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/preparer-un-bibimbap-riz-coreen/
Cuntooyinka 3 ee khudradda khudradda ah ee aad ku doonaysid inaad ku marto! - Hagaajinta caafimaadkaaga
Cunto karis dhaqso ah iyo nafaqo leh - Hagaajinta caafimaadkaaga
Sababtoo ah shirkada Firmino waa mid muhiim u ah Liverpool
DRC: Dib u eegista saxaafadeed ee Jimcaha 19 April 2019 - Afrika
Emmanuel Eboué oo la noolaa xaaskiisa cusub!
Douala, in ka badan Kiniiniyada tramol 150.000.000 ayaa lagu qabtay Gaadiidka
Doorashooyinka Yurub: xujada cirbadaha Ingiriiska
DADKA & LIFESTYLE3,087
Video dheeraad ah651